Japanese Umlunge - enhle engadini isitshalo iris umndeni, libhekene orange-bomvu insimbi-izimbali, bahlangana paniculate inflorescences, futhi ugongolo fan-like wakhomba amahlamvu eqinile. Isici montbretsii (okuthiwa namanje egcekeni isitshalo) ukufana yayo nge iris futhi umlunge; uma Umlunge izimbali ngempela uvalwe obleplivayut njengempophoma enkulu spike spike ngalesosikhathi they khula umlunge Japanese branched.
Japanese Umlunge, betshala nokunakekela kwawo wonke abatshali ukuletha kumnandi, has abangaba ngamashumi ayisihlanu zilwane, abaningi kubo abasekhona besuka eNingizimu Melika, futhi ine elinye igama - Crocosmia, a esuselwe «crocos» futhi «osme» - nephunga.
Japanese Umlunge (Crocosmia): Izinhlobo
Crocosmia Panikulata - zakuqala-zom okusezingeni eliphezulu phakathi obujwayelekile isitshalo nge elikhanyayo orange izimbali. Uma uyiqhathanisa nezinye - kwezinhlobo abandayo ukumelana kakhulu, ethutha ebusika kahle, inqobo nje uma endlwaneni encane.
Crocosmia Lucifer - hybrid, wadala ngesisekelo Crocosmia Panikulata. Izimbali korallovo- luhlaza obomvu. Frost ukumelana isihlobo.
Crocosmia Golden. Libhekene ezinkulu (mayelana 5 cm ububanzi), ophuzi izimbali. Okwazi ezikhulayo umthunzi encane. Izimbali isikhathi - ekwindla. Kubukeka omkhulu empilweni vase.
Crocosmia abavamile. Okuvame kakhulu isiko Japanese hybrid umlunge ezivezwa ukweqa Crocosmia Potts wegolide. Plant ukuphakama mayelana 1.2 amamitha. Izimbali kwenzeka ngasekupheleni kwehlobo.
Montbretsiya libhekene ukumelana nezilokazane nezifo; Kudinga yesondlo ubuncane: ayakhala, Ukukhipha, efaka umquba nokususa ukhula.
Japanese Umlunge (montbretsiya): Incazelo
Montbretsiya has nezilimo eziyizigaxa ezincane (mayelana 2 cm ububanzi) camera enezingxenye eziningana-retina; eyodwa isizini ngayinye enikeza 3-4 enhle imbali Isiqu kanye nokufakwa esikhundleni bulblets ambalwa. Ukuphakama stem - mayelana 0.6-1.0 metres. Amaqabunga eqoqwe rosette, okwenza montbretsii Luhambo ekhethekile. izimbali ezincane (a ububanzi of mayelana 3-4 cm), uphondo emise, nge diverging ohlangothini amacembe. izitshalo ukuqhakaza kwenzeka kancane kancane, ngamunye ngamunye, kusukela phansi kuya phezulu, ukuze kusukela ekuqaleni izimbali (Julayi - Septhemba) kuze kwekwindla Japanese Umlunge ubukeka nenhle. I izimbali kanyekanye wembula izimbali-10. Ukuze ebusika endaweni evulekile izitshalo emhlabathini kungukuthi kwaguqulwa.
Umlunge-Japanese (isithombe lidlulisela zonke charm ubuhle izitshalo elikhanyayo engadini orange) ezizwa okuxekethile, kahle akhanywa, inhlabathi humus-ocebile. Indawo zokutshala kuyinto efiselekayo ukhethe okwanele, okusalungiswa mahhala futhi ilanga phezu ntambama ehlobo. Akumele abatshalwé montbretsiyu umthunzi, ngaphandle kwalokho lesi sitshalo uzoqala yokwelula futhi musa eziqhakaza nhlobo.
Kusukela ekwindla sezwe sihlelwe ukutshalwa umlunge Japanese okudingekayo ukulungiselela, okwenza Umanyolo eziphilayo enhlabathini ngokuhlanganyela lime slaked kanye superphosphate. Ngaphambi luthela, bese njalo emavikini 2-3 umlunge Japanese ukutshalwa kuyinto - akusiwona nzima kakhulu, kutuswa ukuba ondle fertilizer.
Umlunge-Japanese (izithombe kungabonwa esihlokweni) - imbali yinhle ku-rock izingadi kanye ngemuva izimbali undersized. Lesi sitshalo kufanelekile cut izimbali, inflorescences kukhona emanzini izinsuku-10 noma ngaphezulu. izimbali omisiwe ukugcina umbala omuhle wamakhasi nokuma kwawo, ukuze bakwazi ingasetshenziswa ukwakha isixha ebusika.
Ukufika kanye yokugcina ama
Ama kokwehla montbretsii akhiqizwa April no-May at a 6-10 cm phakathi kwendlu izitshalo 10 kuya 12 cm ukujula. Izwe lisatholakala ngempela cool Japanese Umlunge wokuqala yakha uhlelo impande emhlabathini iqala ukuxoxa ngenkuthalo ukwakha aboveground ingxenye. Lapho ukutshala ngolunye usuku kanye ngeke imbali ekukhuleni futhi akazange abe nesikhathi ukuthola impande omuhle, okuyinto kunomthelela omubi ukubukeka kwayo. ama Ukumba kwaveza. Ngemva ukumba up the ama ufuna ukwenza emva yellowing amaqabunga (ngasekupheleni kuka September-October), zidinga ukulungiswa stem ngokucophelela, kusale 5 cm impande ubude bayo. Khona-ke, ama nezingane kufanele kube endaweni eyomile endaweni epholile (sela noma engaphansi) at 6-8 ° C amasonto 1-2, eligoqiwe esitsheni nge ezomile Peat moss noma sawdust. Ngaphambi entwasahlobo betshala ekhiqizwa ngoMashi, ama Kunconywa ukumelana izinsuku ezimbalwa ekamelweni lokushisa, ngemva kwalokho ubangele izenzo wokulungiselela njengoba uhlukanisa izingane, pilled, isitshalo izimpande futhi Kuphendula izinsalela. Ngaphambi ukutshala ama kufanele kube lula ukuba ngiyibambe ikhambi potassium permanganate amahora ambalwa. Lesi sitshalo liyadingeka ezweni isitsha, futhi ngo-May, utshalwe endaweni unomphela ukukhula ekhanyayo.
Japanese Umlunge, betshala nokunakekela zazo musa okudinga umzamo omkhulu, zingatshalwa kusuka imbewu, amakhomu, nezingane. Ukuze uthole isibani montbretsii imbewu abatshalwé Mashi ebhodweni imbali, zonke imbali ehlobo atholakala ezindaweni ongaphandle (ngaphandle ukufakelwa), ekwindla futhi wangena ekamelweni. Kudingeka silinde ukuphela izimbali zayo kanye imbewu yokuvuthwa, ayihlwanyelayo izithombo okuyinto akhiqizwa Februwari. izitshalo abasebasha umlunge Japanese ngaphambi kokutshala ekhanyayo (ekuqaleni kuka June) ngaphambilini Kunconywa lukhuni. Izimbali landa lisuka imbewu umlunge Japanese iza athele ngonyaka wesithathu. Okuningi ukukhiqizwa kabusha elula futhi malotrudoemko izingane, okuyinto ngonyaka Japanese sibathelela Umlunge 5-6 izicucu. Watshala ngendlela montbretsii yokuqhuma ezifana ngonyaka lokutshala.
Ukunakekelwa Proper falinopsisom ekhaya
Isibalo ngemuva kokubeletha